यु’द्ध मैदानका डाक्टरलाई कारवाही गरेर कस्तो पुरुषार्थ देखाउन खाेज्नु भाे मन्त्री ज्यू ? – Everest Pati
यु’द्ध मैदानका डाक्टरलाई कारवाही गरेर कस्तो पुरुषार्थ देखाउन खाेज्नु भाे मन्त्री ज्यू ?
देशमा कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को संक्रमणको गति तीव्र हुँदै गएको छ । कोरोनाको संक्रमण ३० जनामा फैलिएको पुष्टि भइसकेको छ । अर्कातिर संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालनाका लागि आम नागरिक घरभित्रै थुनिएर रहनु परेको छ । मजुदुरीमा रहेका मजदुरहरुलाई रोजगारदाताले काम र दामविहीन बनाउने अवस्था आएकाे छ । यस्ताे अवस्थामा नेपाली मजदुर सयौं किलोमिटरको यात्रा गरेर पैदलै घर फर्किन लागिरहेका छन् । बालबच्चा च्यापेका, भारतीय क्याम्पमै क्वारेन्टाइनमा किरिया बसेका, सडकमा अलपत्र सुतेका, महाकाली नदीमै फाल हानेर मातृभूमि टेकेका नेपालीका अनेकौं कारुणीक दृष्यहरुले सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यम भरिएका छन् । यस्तो बेला सरकारले आम नागरिकमा सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
चैत १२ यता लकडाउन सुरु भएदेखि नै सरकारले नागरिकको मन जित्ने काम गर्न सकेको छैन । अझ आलोचित हुने र जनतालाई निराश बनाउने काण्डहरु मात्रै गरिरहेकाे छ । सुरुमा ओम्नी कम्पनीमार्फत चीनबाट ल्याइएका सामान नै गुणस्तरहीन परेको थियो । महँगो मूल्य देखाएर उक्त सामानमा भ्रष्टाचार भएका चर्चा चुलिएपछि मात्रै सरकारले उक्त कम्पनीसँगको खरिद सम्झौता रद्ध गर्यो । त्यसयता मास्क, सेनिटाइजर र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई)को चरम अभाव देखियो ।
कोरोनाको महामारीका बीच पनि ज्यानको बाजी लगाएर सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी प्रहरीको तलब काटेर कोरोना कोषमा हाल्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट पनि सरकार निकै आलोचित भयो ।
शहरी क्षेत्रमा बस्ने र उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने मजुदरले घर जान नपाउँदा समस्या उस्तै छ । यसको समाधान गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय सरकारहरुले वितरण गरेको राहतमा पनि कुहिएको चामल परेको छ । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले लकडाउन झेलिरहेका नागरिकको घरमा बिजुलीको बिल पठाउन थालेको छ । र, वैशाखभित्र नतिरे जरिवाना लाग्छ भनिरहेको छ ।
कोरोनाविरुद्धको युद्ध मैदान जस्तै बनेका अस्पताल, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन वार्ड र शिविरहरुमा खटिएका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कारवाही गरेर अझै ठूलो पुरुषार्थ देखाएको भ्रममा परेको छ सरकार । खासगरी स्वावास्थ्य मन्त्री भानुझक्त ढकालले यस्तो पुरुषार्थ देखाएका हुन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कार्यरत डा. शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कारवाही गरेर सरकारले निकै ठूलो गल्ती गरेको छ ।
डा. पुनको गल्ती के थियो भने उनी सञ्चार माध्यमको सहज पहुँचमा थिए । र, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिरहेका थिए । रोगका लक्षण, विरामीको अवस्था, विश्वकै अवस्था, नेपालको अवस्थालगायत विषयमा विश्लेषण प्रस्तुत गर्थे । सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि मानिसमा सचेतना फैलाएर यो रोग नियन्त्रणका लागि उनी सक्रिय रहे । लकडाउनका कारण घरभित्रै थुनिइरहेका नेपालीलाई उनले सम्हालिने आँट, हिम्मत र साहस जुटाउन सहयोग गरेको थिए । पछिल्लो करिब १ महिनामा उनी टेलिभिजन च्यानलहरुमा सबैले चिन्न थालेको लोकप्रिय अनुहार बनेका थिए । तर, यसलाई सरकारले खासगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन पराएन । सरकारलार्इ लाग्याे उनले जथाभावी बाेले । र, उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर जिम्मेवारीबाट अन्यत्रै पन्छाउन स्पष्टीकरणकाे पत्र काटेकाे छ ।
विरामीको उपचार गरेर फर्किका चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्ने, डाक्टरलाई कारवाही गर्ने, औषधी किनेर फर्किएका नागरिकलाई निर्घात कुटपिट गर्ने सरकारको कदमले कुनै पनि अर्थमा कोरोनाको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन सक्दैन ।
चीनले गरेको यस्तै किसिमको एउटा महाभूलबाट पनि स्वास्थ्य मन्त्री र सरकारले पाठ सिक्नु पर्ने हो । चीनमा कोरोना भाइरस खतरनाक भएकोले यसबाट बच्न सहकर्मीलाई पहिलो पटक सन्देश प्रवाह गर्ने डा. लि वेङ लियाङलाई प्रहरीले कारवाही गरेको थियो । पछि ती डाक्टरको समेत कोरोना संक्रमणकै कारण निधन भयो । उनको निधनपछि सरकारले अनुसन्धान गरी ती डाक्टरले सही सन्देश प्रवाह गरेको भए पनि प्रहरीले कारवाही गरेर गल्ति गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तो परिस्थिति नेपालमा नआओस् । सरकार बेलैमा सचेत बनोस् ।
भारतमा कोरोनाको महामारी बढेका बेला ठूलो सहयोग गरे सलमानले